IiNgcaciso zeeNgcaciso zamanqaku - Ihlabathi leMatshi
-Amazwe angama-50 (i-11% yabemi behlabathi) abhengeze ukuba izixhobo zenyukliya azikho semthethweni. -Izixhobo zenyukliya ziya kuvalwa njengemichiza kunye nezixhobo zebhayiloji. -Izizwe eziManyeneyo ziya kwenza isivumelwano sokuthintela izixhobo zenyukliya ngoJanuwari 2021. Nge-24 ka-Okthobha, ngenxa yokufakwa kweHonduras, inani lamazwe angama-50 lafikelelwa
Imisebenzi yamvanje e-El Dueso naseBerria
16 / 03 / 2020 15 / 03 / 2020 yi Antonio Gancedo
Ngentsimbi ye-12, kwisikolo sasejele, sinike intetho ngomhla wesi-2 kweyoMnga, i-Humanism eNtsha yoXolo kunye noXolo kunye nogonyamelo. Emva koko kwabakho i-colloquium kunye notshintshiselwano ngeenxa zonke kwezi zihloko. Imibuzo nayo yabuzwa: Ngaba ucinga ukuba uluntu lunobundlobongela? Ngaba ucinga ukuba ngumthengi? Kwakugqitywa, basenza udliwanondlebe nathi
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha29 Elandelayo →